ट्रम्पले स्टिभ बेननलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदबाट हटाए ! - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
ट्रम्पले स्टिभ बेननलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदबाट हटाए !
Posted by Milap Subedi | २४ चैत्र २०७३, बिहीबार ०८:३७ |
२४ चैत,काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्टिभ बेननलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद (एनएससी) बाट हटाएका छन । ट्रम्पले उच्च राजनीतिक सल्लाहकारलाई एनएससीको पदबाट हटाएका हुन ।
बेनन राष्ट्रपति ट्रम्पको लामो समयदेखिको राजनीतिक सल्लाहकार तथा सहयोगी रहँदै आएका छन । अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले ट्रम्प राष्ट्रपति भएपनि सबै निर्णय बेननले गराउने गरेको बताउँदै आएका छन् ।
ट्रम्पले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाले लगतै गएको जनवरीमा बेननलाई एनएससीको सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए । एनएससीको सदस्यबाट हटाइए पनि बेननको बरियतामा कुनै किसिमको फेरबदल नहुने ह्वाइट हाउसका सल्लाहकारले बताएका छन् ।
ट्रम्पका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइकल फ्लेनमाथि निगरानी गर्नका लागि बेननलाई एनएससीमा राखिएको ह्वाइट हाउस स्रोतले जनाएको छ ।
फ्लने रुससँगको सम्बन्धका कारण गएको फ्रेबुअरीमा नै बर्खास्त भएकाले बेनन एनएससीमा बसिरहनु पर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरिएको छ ।
तर ह्वाइट हाउसमा ट्रम्पका ज्वाईं ज्यारेड कुश्नरको प्रभाव बढ्दै गएकाले बेनन एनएससीबाट हटाइएको विश्लेषण गरिएको छ । एनएससी राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा सल्लाह दिने मुख्य समूह हो ।
Previousपोखरामा दिनहुँ असिना पानी, करिब १० करोडको क्षति
Nextमेस्सी र स्वारेजको गोलले सेभिल्ला पराजित ! रियल मड्रिडमाथि दबाब
सरकार र डा. केसीबीचको वार्ता सकारात्मकतर्फ, सम्भवत भोली अनशन स्थगन हुने
८ श्रावण २०७५, मंगलवार २२:०६
अदालतले चेक कीर्ते गर्नेलाई पक्राउ गर्न पठाएको प्रहरीले नै अारोपित भगाएपछि…….
२२ मंसिर २०७५, शनिबार १५:५२
धुमधामसँग गरियो बाख्राको बिहे !
१७ माघ २०७४, बुधबार १४:१७
काठमाडौको बतावरण : ‘मानवजीवन प्रत्येक क्षण खतरातर्फ उन्मुख’
१० पुष २०७४, सोमबार १०:४०